China PVC Wire factory kunye nabavelisi |Shengsong
Isicelo:Ucingo lwePVC olusetyenziswa kakhulu kulwakhiwo lwecingo, imisebenzi yezandla, ukwenza umnatha wocingo, intambo yaseMarine, ukupakishwa kwemveliso, ezolimo, ukufuywa kwezilwanyana nezinye iindawo.
IGuage yocingo lwangaphakathi: BWG4 ~ BWG25
Ububanzi bocingo lwangaphakathi: 6mm ~ 0.5mm
Izinto eziphathekayo: ucingo lwentsimbi yekhabhoni ephantsi, i-Q195, i-SAE1008 (iingcingo zentsimbi eziphekiweyo okanye i-annealed wire)
Uphawu: Ucingo lwethu lwePVC olunokomelela kakuhle, lukwazi ukumelana nomlilo kwaye lunezinto ezintle zokugquma, umbala uluhlaza, ngwevu, mnyama, bomvu okanye tyheli.
Isicelo: ucingo lwePVC olusetyenziswa ngokubanzi kwisakhiwo socingo lwesakhiwo, imisebenzi yezandla, ukwenza umnatha wocingo, intambo yaseLwandle, ukupakishwa kwemveliso, ezolimo, ukufuywa kwezilwanyana kunye nezinye iindawo.
Imveliso yethu ikhetha umgangatho ophezulu wesilika wegalvanization ukwenza imathiriyeli ekrwada, ibangela ukuba iplastiki kunye nocingo olwenziwayo oluthembekileyo emva kokucubungula okunzulu ludityaniswe kunye, luneempawu ezichasene nokuqhekeka ezifana nobomi benkonzo ende kunocingo oluqhelekileyo.
Umbala: Buluhlaza mnyama, luhlaza okhanyayo, omhlophe, obomvu, oPinki omnyama ect.
Ubukhulu: ngaphakathi ububanzi 0.5mm—4mm, ngaphandle ububanzi 1.0mm—5.0mm
Isicelo: Isetyenziselwa kakhulu ukuluka umnatha, ukufuya izilwanyana kunye nokukhusela ipaki yebala lemidlalo yezandla, njl.
Ukupakisha: ibhegi elukiweyo, okanye ngokweemfuno zomthengi
Idayamitha yocingo olungundoqo I-diameter emva kokugquma
Umbala: Buluhlaza mnyama, bhlowu, tyheli, njalo njalo
1. ifakwe imicu yePVC kwaye isongelwe ngePVC okanye ilaphu lehessian
2. iikhoyili ezincinci ze50m, 100m, 150m, 200m, njalo njalo
3. ekupakisheni isigcawu ngoko kwiibhokisi
Ngaphambili: U Chwetheza ucingo
Okulandelayo: Twist Wire